Ala Nkwa ahụ: Ahịa bara uru ma na-adịgide adịgide ROI dị n'ihu | Martech Zone
Nabata na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-akpọ Ndị Ahịa Ahụmahụ Oge.
Site na 2016, 89% nke ụlọ ọrụ na-atụ anya ịlụ ọgụ na ndabere nke ahụmịhe ndị ahịa, na nke 36% afọ anọ gara aga. Isi Iyi: Gartner
Dika akparamàgwà ndị ahịa na teknụzụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya gị ga-ekwekọ na njem ndị ahịa. A na-ejikwa ahụmịhe na-enwe ihe ịga nke ọma ugbu a - mgbe, ebe na otu ndị ahịa chọrọ ya. Ahụmịhe dị mma na ọwa ahịa ọ bụla bụ otu igodo kachasị mkpa na ntopute a.
Idgbasapụ achọpụtawo ihe a na ihe omuma ha na nso nso a, Na-ejikwa Ahịa Ahịa gị maka Agha Ọhụrụ: Ahụmịhe Ndị Ahịa. Ọ bụ nlele zuru ezu banyere etu ahịa ọdịnaya gị si emetụta ahụmịhe ndị ahịa, na-enye ndụmọdụ maka otu esi emetụta akara gị.
A nwere ike chịkọta ihe ndị nwere ahụmịhe ndị ahịa na-enwe mmetụta atọ:
Mara onye ahịa - Kweta onye ahịa, akụkọ ihe mere eme ha, na mmasị ha.
Bịara onye ahịa - Banye na mmetụta uche, gosipụta ihe ha na-eche banyere ya, ma egbula oge na ihe ndị na-adịghị.
Ahapụla onye ahịa ahụ ka ọ kwụwara n’elu - Nye azịza dị mkpa, oge dị mkpa mgbe na ebe ndị ahịa chọrọ ya.
A na-enweta ahịa ROI bara uru ma na-adigide. Soro usoro ndị a, azụmahịa gị ga-abanye Ala Nkwa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Tags: ọdịnaya managementcontent Marketingahụmahụ ahịanjikwa ihe onwunwe dijitalụinfographicgbasaa